Dongeng rapunzel dalam bahasa Igbo - Sabaya pati sabaya mukti
Dongeng rapunzel dalam bahasa Igbo
O ruru otu mgbe, e nwere ndị a di na nwunye ndị nwekwara ọchịchọ siri ike a na nwa. Ha na-Mmetụta dị mwute na owu na-ama nke kpuchie niile ha nwere. Ma otu ụbọchị, ihe ijuanya na ndị nwunye nwere a ịrịba ama nke gosiri ya nọ na-atụrụ ime. Ha dị oké nnọọ obi ụtọ banyere ya. Ha awụlikwa elu na-asị ee.
Ma obi ụtọ ha nwere na-agba ọsọ ogologo. The nwunye dara ọrịa. The di nakwa mgbagwoju anya n'ihi na na-enweghị ọgwụgwọ ma ọ bụ agwọ ahụ nwere ike inyere ya. Ma mberede, otu agadi nwaanyị na-atụ aro na-ewere rampion ifuru na ọ bụ nanị eto na ugwu nta.
The na di-ya we je were rampion okooko osisi na-eji na-agwọ nwunye ya. Odomo ebe ahu ebe ahụ na okooko osisi na-eto bụ a n'ógbè ọjọ ọkachamara nọrọ. The di ya enweghị ọzọ nhọrọ, ma ọ bụrụ na ọ na-enweta ya, nwunye ya ga-anwụ. O mesịrị Ekwuru na-rampion ifuru. Ma dị mwute ikwu ya na mgbalị kụrụ afọ n'ala, ihe ọjọọ nke nọ na-ahụ rampion ifuru jide ya na-ezu ohi okooko osisi n'ogige.
"Olee ihe mere ị na-ezu ohi okooko osisi n'ogige !!!" ka ọkachamara ahụ iwe.
"I nwere ike mee ka rampion okooko osisi si m ogige dị ukwuu dị ka gị mkpa. M na-agbagharakwa gị omume na nke a. Ma otu ihe. Ị ga-enye nwa ahụ na a ga-amụ m. Na Echegbula onwe gị, m ga-emeso nwata dị ka nwatakịrị ka m "ka ọkachamara.
The di nakwa mgbagwoju anya. N'ikpeazụ ọ họọrọ mma na chọrọ maka nchekwa nwunye, ya na ụmụ e mesịrị mụọ. Na mgbe mụrụ nwa ọhụrụ, ndị amoosu pụtara ma nye nwa nke aha ya bụ Rapunzel na-ekporo ya site n'aka ndị mụrụ ha.
Rapunzel eto n'ime a mara mma nke ukwuu girl. Mgbe ọ dị afọ 12, ndị ọkachamara ekpochi a elu ụlọ elu n'etiti ndị dị n'oké ọhịa. The ụlọ elu enweghị steepụ ma ọ bụ ọnụ ụzọ, naanị a obere window na elu nke ulo-elu. Na mgbe amoosu edi ndise, ọ nyere iwu Rapunzel ida ntutu isi ya.
Yup, Rapunzel e jiri a mara mma nke ukwuu ntutu isi, ogologo na-egbu maramara dị ka gold. Rapunzel ga-erite ntutu site na window ala na na Rapunzel ajị bụ ọkachamara nwere ike ịrị n'elu ulo-elu ahu.
Mgbe ọtụtụ afọ nke bi na ulo-elu, a mara mma isi bụ onye e achụ nta n'ọhịa mmadụ na mberede nụrụ mara mma na-abụ abụ na-abịa site na ụlọ elu. Ọ gbalịrị chọpụtara na chọrọ ga-esi n'ime ụlọ elu ahụ ma ha ahụghị ụzọ ma ọ bụ steepụ ka ọdọkde aka. Onye-isi nọ n'ezigbo nsogbu na kpebiri ịga n'ụlọ. Ma ọ nụrụ-abụ abụ nke metụrụ ya n'obi. Ya mere, ụbọchị ọ bụla ọ banyere n'ime ọhịa ma nụ. N'otu oge, ọ hụrụ a dibịa afa wee ulo-elu, sị:
"Rapunzel, Rapunzel ,, ịgbatị ntutu gị ala maka m."
Rapuzel Akpata oyi wụrụ na ụjọ mgbe ọ na-enyo a mara mma-isi, na-ebili n'elu. Rapunzel ahụtụbeghị onye ọ bụla ọzọ karịa amoosu. Ma onye-isi ka okwu were were na enyi na enyi na-eme hụ Rapunzel. Onye-isi gwara mere o ji anwa anwa n'ime ụlọ elu. Ha na-ekwu otú obi ụtọ na-. Ha nọ na-ada ada na ịhụnanya ọ bụla ọzọ na mbụ echiche. Rapunzel juru ya nnọọ anya mgbe e mesịrị onye-isi gwara ya ka ịlụ ya. Na Rapunzel gwara ee.
Onye-isi mwute ma sikwara ike njite. N'ikpeazụ, o wụpụ ụlọ elu ahụ ka gbapụ amoosu. Ma dị mwute ikwu, ogwu mara ube n'ime anya abụọ mgbe ada ada. Onye-isi ghọrọ kpuru ìsì. Ọ nwere mwute na ije aimlessly ịkwa arịrị ya akara aka onye furu efu nwaanyị ọ hụrụ n'anya. Ogologo oge na-agba ọsọ aimlessly; ruo akpọrọ ya gaa desert ebe Rapunzel na iyuzucha. Nke ahụ bụ ebe onye-isi nụrụ mara mma na-abụ abụ a na-agaghị echefu echefu. Ee, ọ bụ nke enyi ya nwanyị nọ na-abụ abụ ọma, Rapunzel.
Ha abụọ mechara jikọghachiri. Rapunzel kwụsị ibe ákwá, ọnọdụ onye ọ hụrụ n'anya nọ na kpara aka ọjọọ na-ìsì. The ọrụ ebube mere, Rapunzel anya mmiri dripped n'ime n'anya onye-isi, na anwansi ka anya abụọ nke onyeisi meghere na o nwere ike ịhụ ọzọ. Onye-isi e me Rapunzel laghachi na ulo-, ha abụọ biri ndụ obi ụtọ na-ruo mgbe ebighị ebi.